Jab weyn oo soo gaaray dhiig-cabtada al-Shabaab
Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XCDS) ayaa dhawaan daafaha magaalada Xudur ee gobalka Bakool waxay ku dileen 40 ka tirsanaa kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab.
Taliyaha CXDS, jeneral Odowaa Yuusuf Raage, ayaa warbaahinta u sheegay in ciidammada ay howl-gal billaabeen kaddib markii ay maqleen in xubno ka tirsan Shabaab ay goobtaas lagu dilay ku sugnaayeen.
“Ciidammadeenna waxay jab weyn gaarsiiyeen kooxda Shabaab, waxayna dileen 40 ka mid ahaa kooxdaas, oo uu ka mid yahay hoggaamiyahooda Xudur,” ayuu yiri taliyuhu, isagoo raaciyay in kooxda laga furtay hub badan.
Dadweynaha ku dhaqan tuulada Abal ee daafaha magaalada Xudur ayaa sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa dagaal aad u xooggan kaasoo jab weyn ay kala kulmeen dhiig-cabtada Shabaab.
Isla gobalka Baay, CXDS waxay lix ka mid ahaa al-Shabaab ku laayeen magaalada Diinsoor 27-dii bishii lasoo dhaafay ee Maayo. Dowladda Soomaaliyeed waxay sare u qaadday weerarrada iyo howl-gallada ka dhan ah al-Shabaab ee dhammaan dalkeenna hooyo.
Dadaallada lagu cirib-tirayo al-Shabaab waxay socdaan marxaladdii ugu fiicneed iyadoo awoodda al-Shabaab aad loo wiiqay, taasoo ku khasabtay in xubno badan oo al-Shabaab ahaa ay soo goostaan. Weerarro ay al-Shabaab soo qaadeen oo dhowr ahaana waa laga hortagay siiba Jubbooyinka. Ciidammada Jubbaland waxay ka hortageen weerar ay Shabaab ku soo qaadeen Bilis-Qooqaani iyo Dhoobley horraantii bishaan Juunyo.